Ku Samee Jikadaada Mid Wacan oo Wacan Tusbooyinka Jikada - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / blog / Ka dhig jikadaada mid xariif ah oo leh qasabadaha jikada
2021 / 09 / 24 Qoondayntablog 2449 0
Tuubooyinka kushiinka waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan waxayna u muuqdaan kuwo si fudud loo heli karo, waxaadna si fudud uga iibsan kartaa qasabadahaas aadka u soo jiidashada badan ee waxtarka leh dukaan kasta oo qalab ama caafimaad ah oo ku yaal aagga dukaanka ee kuugu dhow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa badanaa lagu taliyaa in qasabadaha jikada ee sumadda leh laga iibsado shirkado sumcad leh oo ay tahay inay lahaadaan karti aad u weyn oo ay sameeyaan khibrad waarta oo waarta iyo qasabadaha jikada oo awood leh.
Macaamiisha ayaa si fudud u heli kara biyo kulul iyo qabow Qasacyada naxaasta Qadiimiga ah aad bay u caawin karaan. Qasabadahaan aadka waxtarka u leh ee waxtarka leh ayaa noqon kara jawaabta ugu fiican ee lagu nadiifin karo dhammaan jikadaada, dharkaaga iyo hawlaha kale. Qasabadaha jikada, si kastaba ha ahaatee, waa in loo adeegsadaa habka ugu habboon si kor loogu qaado wax -soo -saarkooda iyo wax -ku -oolkooda si habboon. Qasabadaha ayaa aad u soo geli kara haddii aadan hayn karin ama si fiican u daryeeli karin qasabadaha waxyeeli kara ama dhici kara.
Tuubooyinka jikada ee dhalaalaya oo dhalaalaya ayaa dhab ahaantii u muuqda inay ku daraan muuqaalka jikada oo dhan sida ugu fiican ee suurtogalka ah. Kuwani waa kuwo aad u waara laakiin waxay siiyaan fasal iyo xarrago dheeraad ah qasabadaha iyo saxnaanta. Waxay ka samaysan yihiin agab aad waxtar u leh oo wax ku ool ah si ay u siiyaan soo -saare sare iyo cimri -dherer weyn dadka isticmaala.
Qasabadda jikada ee la dhammeeyey waa mid tayo sare leh; dhammaystirka la wanaajiyey waa sahlan tahay in la qabsado quluubta isla markiiba la arko macaamiisha iman kara. Qasabadda waxaa dhab ahaan ka samaysan bir bir ah oo wax soo saar badan leh iyo hagaajinta cimriga naxaas ama aluminium. Qasabadda jikada naxaasta ah ee ugu fiican ayaa ah mid guriga lagu sameeyo iyadoo la isku darayo dhaqdhaqaaqa moodada iyo farshaxanka aadanaha, ka -reebitaanno badan ka dib.
Faa'iidada weyn ee muraayadaha musqusha ee naxaasta ahi waa in ay yihiin wax biyo u adkaysta oo ka hortaga miridhku waxyeello. Waxaa lagama maarmaan ah in la diido daxalka kasta oo si dhab ah u dhaawici kara qasabaddaada. Dhinaca kale, qasabadaha jikadaas naxaasta ah waxaa lagu daboolay hannaan cusub oo dahaadhka ah kaas oo siiya dadka isticmaala wax -soo -saarkooda iyo waxtarkooda. Waxaa si fudud loo isticmaali karaa iyada oo aan lahayn culays iyo waqti badan.
Dhinaca kale, qasabadda jikada ma keento nooc kasta oo khatar caafimaad ah waxayna noqon doontaa goob shaqo oo habboon oo la isticmaalo iyada oo aan wax dhibaato ah. Qasabaddu waxay leedahay naqshad casri ah oo aad u fiican oo jikadaada u keenta muuqaal cusub oo u gaar ah. Dhab ahaantii, waxaa laguu xaqiijin karaa nolol wanaagsan oo aan lahayn wax caqabad ah. Qasabadahaani waxay dhab ahaantii yareyn karaan heerarka walaaca ee jikadaada.
Ikhtiyaarada Qasabada Musqusha ee aan la tirin karin
Dad badan ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan in helitaanka qalabka musqusha ee ugu fiican ay u egtahay mid fudud sida pie. Laakiin runtu waxay tahay, madaxaaga ayaa wareegi doona marka ay timaaddo inaad ka soo saarto alaabta saxda ah xulashooyinka aan dhammaadka lahayn. Tuubooyinka musqusha waxay jireen muddo tobanaan sano ah mana isticmaalaan teknoolojiyad casri ah, laakiin waxay qaadataa xoogaa faham ah si loo doorto gabalka ugu fiican. Waa inaadan xoogga saarin naqshadeynta iyo bilicsanaanta marka laga reebo qaabeynta, nooca waalka, dhammaadka iyo qaabka. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waa dhammaan qodobbada muhiimka ah ee aan la iska indho -tiri karin.
Aynu eegno sida dhinacyadan gacan uga geysan karaan go'aaminta qasabadda ugu fiican ee musqushaada.
Tan micnaheedu waxaa weeye nooca guud ee qasabadda haddii ay gidaar ku rakiban tahay iyo haddii ay keli tahay. Shuruudaha sida dhow ula xiriira qaabeynta badanaa badhtamaha buuraha iyo qaabka ballaaran. Shuruudahan waxay la xiriiraan cabbirka qasabadda iyo inta aaggu ku daboolan yahay saxanka. Iyada oo masaafo 4 inji ah u dhexeyso gacmaha, noocaan waxaa lagu magacaabaa nooca dhexda ku rakiban wuxuuna ku habboon yahay saxammada yaryar iyo musqulaha. Waxaad kala dooran kartaa labada gacmood iyo qasabadaha hal-go'an leh. Tubooyinka waaweyn waxay leeyihiin 2 gacan oo biyaha kulul iyo kuwa qabow leh, iyadoo gacmaha la dhigay masaafo ugu yar oo ah 6 inji.
Shaki kuma jiro in qasabad tayo fiican leh ay socon doonto muddo dheer. Xulashada maaddadu waxay ka ciyaaraysaa door muhiim ah halkan. Naxaasta inta badan waa la isticmaalaa qiimuhuna waa sax. Qalabka ugu raqiisan waa caag, taas oo niyad jab ku noqon karta xagga adeegga. Nooca ugu toosan ee waalka wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyadda walaaqa cadaadiska, kaas oo adeegsada muraayad u eg si loo kala sooco biyaha kulul iyo qabow gacanta. Maadaama ay khuseyso goomaha caagga ah, fursadaha ayaa ah inay si dhakhso ah u duugi doonaan oo ay u baahan doonaan dayactir dheeraad ah. Qasabadaha keli-keli-u-socodka ah, valves kubbadda ayaa la isticmaalaa. Waxay u oggolaadaan biyaha qabow iyo kuleylka ah ee dhex mari kara xaarka inay isku qasmaan. Waxaa jira qaybo badan oo ma jiraan dhaqe. Fiilooyinka kartridgeku waxay isticmaalaan qaybo yar waxayna isticmaalaan gacmo godan. Waxa kale oo ay si dhakhso ah u daallan yihiin. Fiilooyinka dhoobada dhoobada ee adeegsada 2 cajaladood oo xakameeya socodka biyaha oo dhexdooda ka leh waxqabad ayaa ugu fiican marka ay timaaddo cimri -dhererka noocyada kala duwan ee biraha ee qasabadaha musqusha.
Waxaad u xumaan doontaa doorashada marka ay timaado noocyada sagxadaha laga heli karo suuqa ee qasabadaha musqusha. Nikkel, chrome, naxaas, caag, naxaas caday, dahab satin ah, iyo naxaas saliid la mariyay ayaa ka mid ah xulashooyinka caadiga ah. Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarro badan oo midabyo ah oo aad ka dooran karto. Waxa aad u baahan tahay inaad si dhab ah diiradda u saarto waa dhammaynta dusha. Raadi kaydinta uumiga jirka ama dhammaadka PVD. Baahida loo qabo in la helo astaantan ayaa ah in ay qasabadahaaga ka dhigaan kuwo cusub oo waliba xoqan u adkaysta. Waxaad haysataa dhowr ikhtiyaar oo midab leh halkan. Waxa kale oo aad dooran kartaa qasabadaha chrome-plated, gaar ahaan haddii aad rabto naxaas. Tani waxay iska caabin doontaa midab -bedelka iyo daxalka. Waxaa jira waxoogaa dhammaad ah oo loo yaqaanno dhammaynta beerta, sida gacan-marinta ama naxaas saliidda lagu xoqay. Kuma hoos jiraan damaanad mana bixiyaan shaabad ilaalin ah qasabadda.
Naqshadeynta farsameynta qasabadda waa qeybta muuqaalka ah ee qasabadda. Waxaa jira noocyo badan oo ku xiran gacanta aad doorato. Habka gooseneck ayaa sida caadiga ah la doorbidayaa maxaa yeelay waxay siisaa hawlo kala duwan. Rinjiyeyaasha, ikhtiyaarrada gacmo-la'aanta ah iyo naqshadaha leh sahayda biyaha dhuuban ayaa sidoo kale caan ah. Tuubbooyinka leh gacmaha tilmaamaya ayaa sidoo kale meel ku leh musqusha maxaa yeelay way fududahay in la isticmaalo.
Haddii ay suurtogal tahay, dooro saxan -biyoodka iyo qasabadda si aad u hubiso inay is -waafaqsan yihiin. Qasabadaha iyo qubayska Waxaa jira kala -duwanaansho iyo qaab aad u qurux badan oo leh fursado muhiim ah oo loogu talagalay ilaalinta biyaha iyo ku -habboonaanta isticmaalaha.
Hore:: Qasabadaha Aagga Jikada - Doorashada Mid Wanaagsan Next: Talooyin Ku Saabsan Ilaalinta Tuubooyinka Musqushaada Meel La'aan Iyo Biyo la'aan
2021 / 09 / 24 2339